Ukukhutshwa kwemali yonyango | Isiseko soMvuzo - Uthando, ubulili kunye ne-Intanethi
Ikhaya Resources YokuLawula
Le nkcazo yinkcazo yokukhutshwa kwezonyango kwi-Foundation Reward Foundation. Le website iqulethe ulwazi jikelele malunga neemeko zonyango kunye neyeza. Ulwazi aluyiluleko, kwaye akufanele luphathwe njengolu hlobo.
Ulwazi lwezokwelapha kule webhusayithi lunikezelwa "njengalokhu" ngaphandle kweempawu okanye iziqinisekiso, ukuvakalisa okanye ukuchazwa. I-Foundation Foundation ayifumananga nantetho okanye iziqinisekiso ngokumalunga nolwazi lwezokwelapha kule website.
• Ulwazi lwezokwelapha kule website luya kufumaneka rhoqo, okanye lufumaneke konke; okanye
• Iinkcukacha zezokwelapha kule website zizalisekile, zinyani, zichanekile, zifikelele kumhla, okanye ziyikhohlisi.
Akumelwe uthembele kwingcaciso kule webhsayithi njengenye indlela kwiingcebiso zonyango evela kumgqirha wakho okanye omnye umboneleli wezempilo.
Ukuba unemibuzo ethile malunga naluphi na umcimbi wonyango kufuneka uqhagamshelane nodokotela wakho okanye omnye umboneleli wezempilo.
Ukuba ucinga ukuba unokubandezeleka kwimeko ethile yonyango kufuneka ufune unyango olusondeleyo.
Akufanele unqabile ukufuna iingcebiso zezokwelapha, ukungahoywa ngcebiso ngonyango okanye ukuyeka unyango ngenxa yenkcazelo kule website.
Akukho nto kule nkqubo yokukhutshwa kwemali yonyango iya kunciphisa nayiphi na amatyala ethu nangayiphi na indlela engavumelekanga phantsi komthetho ofanelekileyo, okanye ukukhuphela nayiphi na iimfanelo zethu ezingenakukhutshwa ngaphandle komthetho osebenzayo.
Olu xwebhu lwenziwe kusetyenziswa itemplate yeConologyology efumanekayo ku: http: //wdffitsetlaw.com.